Mpanoratra: Moore et Kirk Sunley
Helikoptera hiady afo. Izao no tohin'ny ny trano-lay Sikorsky HH-Series 60F. Io add-tamin'ny tsy ampy amin'ny maro samy hafa textures. helikoptera tena sarotra ny hiatrehana, dia manantena fanehoan-kevitra avy aminareo! Aza misalasala mba hilazana ny fahatsapana. Tsara fitsapana sy ny tsara sidina, miady mahomby manohitra afo.
Produced by Sikorsky Aircraft Corporation hatramin'ny 1974, S-70A sy S-70B fanondranana no dikan 'ny Uh-60 Black Hawk sy ny SH-60 Seahawk